Pollen Mgbanaka - Imewe Mmewe
Mgbanaka Akụkụ nke ọ bụla bụ nkọwa nke mpempe okike. Ọdịdị ahụ ghọrọ ihe ngosi iji nye ndụ dị egwu, na-eji ọkụ na ndò ya egwuri egwu. Ebumnuche a bụ inye onyinye dị iche iche ịkọwa dịka ọdịdị ga -emepụta ya iji mara ma nweekwa mmetụta. A na-emecha iberibe ihe niile iji kwalite udiri na ihe dị mkpa nke ịchọ mma. Thedị ahụ dị ọcha iru iru ihe ọkụkụ. Nsonaazụ na-enye otu ibe ihe pụrụ iche na oge na - ejikọta ya na okike.
Aha oru ngo : Pollen, Aha ndị na-emepụta ya : Christine Alexandre, Aha onye ahịa : Chris Alexxa Jewels.
Mgbanaka Christine Alexandre Pollen